श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन ! पौष २७ गते बिहिबार इश्वी सन २०१८ जनवरी ११ तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल « Light Nepal
श्री पशुपतिनाथले सबैको कल्याण गरुन ! पौष २७ गते बिहिबार इश्वी सन २०१८ जनवरी ११ तारीख माघकृष्ण पक्ष, आज तपाईको भाग्य कस्तो छ हेर्नुहोस राशिफल
Published On : 10 January, 2018 11:50 pm
आज श्री शाके १९३९ बि.स. २०७४ साल पौष २७ गते बिहिबार इश्वी सन २०१८ जनवरी ११ तारीख माघकृष्ण पक्ष दशमी तिथी चन्द्रमा तुला राशिमा सुर्य दक्षीणायन हेमन्त ऋतु पृथ्वी जयन्ती, राष्ट्रिय एकता दिवस – ज्यो . पं . सरोज घिमिरे / लाइटनेपाल डटकम
भोगबिलासका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहला । मनोरञ्जनका साधनको खरीदमा सामान्य खर्चको सम्भाबना रहेकोछ । नयाँकार्य थालनिका निम्ती आर्थीक लगानि उत्तम रहनेछैन । सामान्य मान प्रतिष्ठा प्राप्तीको योग रहेकोछ ।
सामाजिक कार्यमा समय ब्यतित गर्नुपर्ने समय रहेकोछ । प्रतिपक्षी सबल रहनाले कार्यसम्पादनमा गोप्यताको आवश्यक महसुस हुन सक्नेछ । स्वास्थमा देखिएको समस्याका कारण सामान्य खर्चको योग बनाउनेछ ।
कला कौशल तथा मनोरञ्जनका क्षेत्रमा समय ब्यतित रहनेछ । प्रतिष्ठीत ब्यत्तित्वहरुको साथसहयोगले मन हर्षित रहनेछ । नयाँकार्यको प्रारम्भ गर्न उत्तम समय रहेकोछ । मानसिक चन्चलताले कार्यक्षेत्रमा सामान्य झन्झट उत्पन्न हुनसक्नेछ ।
भौतिक श्रोतसाधनको प्रयोगमा समय ब्यतित रहनेछ । पारिवारिक स्वास्थमा सामान्य तनाव उत्पन्न हुन सक्नेछ । सभासम्मेलन जन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहनेछ । ब्यापार ब्यवसायका क्षेत्रमा समय उत्तम रहनेछ ।
मित्रजनहरुको साथ सहयोगमा अधुराकार्यहरु सम्पादित रहनेछन । आटँ र शाहसमा बृद्धि हुनेछ । तपाईको कार्य सम्पादनको श्रेय गैर ब्यत्तिहरुलाई प्राप्त हुनाले कार्य क्षेत्रमा निराशा उत्पन्न हुन सक्नेछ । यात्राका क्षेत्रमा सजग रहनु होला ।
स्वास्थमा सामान्य तनाब उत्पन्न हुन सक्नेछ । भोज भतेरजन्य कार्यमा सहभागीताको योग रहनेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोकाहुन सक्नेछ । बाणीका कारण निकटतम ब्यक्तिहरु सगँको सम्बन्धमा तिक्तता उत्पन्न हुनेछ ।
जिबन साथिको सहयोगमा गरीएका कार्य बाट मनग्य लाभ प्राप्त हुने समय रहेको छ । ब्यापार ब्यवसाय मा भने सामान्य ढिलाईको सम्भाबना रहेको छ । कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ ।
बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । अरुको कार्य लापरबाहि को प्रतिफल तपाईलाई आईपर्न सक्नेछ । आय आर्जनका लागी भने समय उत्तम रहेको छ । साजेदारी ब्यवसायमा मनग्य लाभ मिल्नेछ ।
कुलकुटुम्ब हरुको साथ सहयोगमा कमि आएको महसुस हुनेछ । बौधिक ब्यत्तित्व सगँको भेटघाटमा समय ब्यतित रहने छ । खानपानका कारण स्वास्थमा सामान्य खराबि देखा पर्नेछ । बिश्वासिला ब्यत्तिहरुबाट धोका हुन सक्नेछ ।